News Lifestyle Online: manfaat pare bagi wajah
manfaat pare bagi wajah Pare uru ndị dị nanị mkpụrụ osisi ahụ, ma epupụta nke ilu egusi nwekwara ike inye ike uru nke kwekọrọ nnọọ . Pare ma ọ bụ ndị na Latin mara dị ka Momordica charantia L bụ otu mkpụrụ ahụ nke nwere ilu uto . Ọ bụ ezie na o nwere obi ilu uto , ma, ọ bụghị mmadụ ole na ole ndị na -eme ka obi ilu egusi dị ka otu onye nke na akwụkwọ nri na -adị kwa ụbọchị na-eri. Na ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị, pare Inine pụrụ inye a tọrọ ụtọ , detụ ire mouthwatering .
Pare ogologo ekara ka eggplants , akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma gụnyere n'ime osisi mgba nke ị ga nke osisi ndị ọzọ . A osisi agbatị ma ọ bụ coiled elu na-esonụ dị nso osisi mee moorings . Ntem, ke ilu egusi osisi cultivation , ndị ọrụ ugbo na-emekarị nye mgbasa ozi nkwado nwere ike ịbụ achara, osisi ma ọ bụ ndị ọzọ , usoro mgbasa ozi na e nwere ike iji mgba osisi pare .
Pare osisi nwere ike kụrụ n'akụkụ ụlọ ahụ, ma obu na yad ma ọ bụ a kụrụ n'ubi. Ntre nso idi ufọn maka ahuike na nrụpụta ọrụ nke ilu egusi ? Nke a bụ ụfọdụ Njirimara ndị dị otú ahụ dị ka nke ahụ e kwuru site kesehatan.kompasiana.com .
Nwere ike ịgwọ jaundice .
Iji ikwado mgbaze
Nwere ike ji mee ihe dị ka ịba ọgwụ
Nwere ike belata ọbara sugar -etoju
Iji jiri nwayọọ na nje HIV- nje virus Ọrịa Aids
Iji nọgide na-enwe mma nke anụ
Nwere ike na-alụ ọgụ cancer sel
Ndị nrụpụta ọrụ nke ilu egusi doo maka ahụ ike
Nwere ike ịgwọ ọrịa afọ ọsịsa na ụmụ ọhụrụ
Nwere ike ihicha ọbara nke ndị inyom dị mụrụ
Nwere ike ibelata okpomọkụ
Ike N'ỤLỌ NCHE pinworms
Nwere ike ịgwọ ọrịa ụkwara
N'agbanyeghị na ọtụtụ ndị uru ilu egusi maka ahụ ike , ma, ị kwesịrị ị na -erepịaghị gabigara , karịsịa nke ndị nne ndị na- mendangung . N'ihi na nke a ọmụmụ ime ụmụ oke mkpotu na oké ochichi nke ilu egusi mkpụrụ pụrụ iduga imeopupu .
Dị ka ndị ikom, ndị na-aṅụ oké ilu egusi ike nakwa ala spam ọnụ , ya mere e nwere ike ji mee ihe dị ka onye pare nke eke ezinụlọ ime ezigbo atụmatụ. N'ihi na -adị kwa ụbọchị oriri na-edozi , ị nwere ike nweta uru nke dragọn ahụ mkpụrụ riri anya kwa ụbọchị. Jisie !
Diposting oleh Lisa Fernandez di 11.06